Usuku lomkhumbi - yiyiphi inombolo ka-2016 eRussia nase-Ukraine. Ukuncoma okufishane nokuhlekisayo ku-prose, izinkondlo nezithombe ngosuku lwe-tankman
Usuku lwama-tankman lufushane futhi luyathokozisa ngokusekela, izinkondlo nezithombe. Ngukuphi usuku usuku lwe-tanker 2016 eRussia nase-Ukraine?
Umsebenzi we-tankman ungenye yezinto ezihlonishwa kakhulu ezempi, futhi amasosha e-tank ayingxenye ebalulekile yamandla omhlaba. Kanye nabalindi bemingcele, ama-paratroopers namanye amaqhawe, abagibeli bamathayi abavikela ngempela - abanesibindi, abanesibindi, abazidela. Banikeza ukusekelwa komlilo onamandla, imisebenzi ekhukhumezayo nokuzivikela, izenzo zezinyunithi zamasosha. Akumangalisi ukuthi bazinikezele kosuku lwekhalenda elihlukile - iholidi lobuchwepheshe losuku lomkhumbi. Ngolunye lwezinsuku zikaSeptemba, abasebenzi bamayunithi amathangi, abaklami, ama-cadets kanye nabanye bathokoza ngama-prose, ivesi kanye nezithombe ezivela kubasebenzi, ukuphathwa, iziphathimandla, abangani nabathandekayo. Ngosuku luni losuku lwe-tanker 2016 eRussia nase-Ukraine lufundwa ku!
Uyini usuku losuku lwama-tanker 2016 eRussia nase-Ukraine?
Amathangi okudoba amahhotela angenawo usuku oluthile. Njalo ngonyaka eRussia nase-Ukraine usuku lwama-tankman lugujwa ngamanani ahlukene. Kodwa kungakhathaliseki indawo yamasonto wekhalenda, lo mkhosi uhlale njalo ngeSonto lesibili lwenyanga yokuqala yokukwindla. Ngo-2016, kokubili i-Ukraine neyabaseRussia ngalolu suku nguSeptember 11, ngo-2017 - Septemba 10, ngo-2018-Septemba 9, njll. Ezingeni elisemthethweni, lo mkhosi waqala ngo-2006 emva kokuthi uVetin asayine isinqumo esithi "Ekuqaliseni Izinsuku Ezingakhohlwayo namaHhovisi amaHhovisi amaHhovisi amaHhovisi aseMbusweni waseRussia." Manje, ukwazi ukuthi bangaki abantu abagubha usuku lukaTankman sika-2016 eRussia nase-Ukraine, ungakwazi ngokuphepha ukuqala ukubheka ukuhalalisela.
Funny ukuhalalisela ngosuku lwe-tanker 2016 evesini
Naphezu kokuthi usuku lwamanje lweholide luhamba ngeselula, kanye ngosuku oluzinikezelwe kuma-tankmen, liba nenombolo efanayo. Ngokusemthethweni, lo mkhosi ubuya ezikhathini zamaSoviet, lapho wawusungulwa njengenkokhelo yokuhlonipha lo msebenzi. Namuhla, izinhlelo ezibucayi, izinhlelo zekhonsathi, ama-concert ama-artists ahalalisela amahle ngoSuku lwe-Tankman sika-2016 abanjwe eholidini lobuchwepheshe labasebenzi behlukanisa tank. Abangane nezihlobo bavame ukujoyina itafula labo, ukukhala ngezingilazi zewayini, izigqoko zewayini namazwi afudumele. Ukuthokozisa okujabulisayo ngosuku lwe-tanker 2016 luyingxenye ebalulekile yomkhosi. Umshini wezempi owesabekayo Umkhuzi ongenakuzimela, ngeke usheshe ukuthatha umhlalaphansi! Ngokungafanakali umfaniswano wakho, Usindiswe ngodumo olunamehlo nobuqhawe Unguwe ... Siyakuhalalisela ngosuku lwe-tankman! Hlala uhlala njalo!
Asikuthandi ngezimoto, Futhi amandla afihliwe kuwo. Siyakuthanda ngoba ungumfundisi, futhi amandla akho asempilweni yansuku zonke yempi. Vumela umhlaba ujabule ama-banknotes, Futhi uzalwa ngenkazimulo! Unomsebenzi okhethekile ngaphambili! Ama-tankmen adinga umhlaba wezilwane!
Ukuduma kuqhuma, umhlaba uyagubha, Leli yithangi lethu ligijima! Ungumuntu oshisayo, enhliziyweni yakhe - i-patriot, Isitha ngeke sisuke kuye noma kuphi! Sasiyazi ukuthi amathangi ayenzile ngokwanele, NjengaseRussia, umhlaba awubonanga: Sifisa wena impilo, amandla nenjabulo, Siyahalalisela amadoda langempela ngalolu suku!
Ukuhalalisela kakhulu ngosuku lwe-tankman ezithombeni
Bonke abakhona nabasebenzi be-tank division (abakwa-draftes kanye nabontonkontileka), ama-cadets, izikhulu, othisha bezikhungo ezikhethekile zezemfundo, onjiniyela, abakhiqizi, abasebenzi bezikhungo zocwaningo kanye namafektri akhiqiza izimoto ezinkulu ezihlomile zibandakanya emikhosini ehlukahlukene ehlelelwe usuku lweTankman. Bonke bafanelwe ukuhalalisela kakhulu ngosuku lwe-tankman ezinkondlweni ezinhle, imigqa ye-prose, izithombe nama-postcard. Njengomthetho, abangane, izihlobo nabangane bamaqhawe omkhosi bajoyina umkhosi. Kanye nalabo osebenza nabo, abashade nabaphathi, banikela ngokuncoma kakhulu kakhulu ngosuku lwe-tankman ezithombeni, emakhadikhadi, ema-sms.
Ngiyakuhalalisela ukuthanda intandokazi kaTanin evesini
Abafazi bama-tankmen bahlale beqhayisa ngabashade babo. Phela, ngoba insizakalo enzima kangaka ayanele ngokwazi isu kanye nesu. Kuyadingeka ukuba ube nesibindi, unesiphephelo nesibindi, kungakhathaliseki isimo nesimo sezinto. Ukuhalalisela okuhle ngosuku oluyintandokazi kaTankin kuyindlela enhle yokuveza uthando lwakho nokuziqhenya kumaqhawe akho. Vumela usuku oluhle lomuntu othakazelisayo lujabule kakhulu luzokwenza abathandekayo bakho babe nemizwelo efudumele futhi emihle. Ngifuna wena, othandekayo wami, ngihalalisela i-tankman ngosuku Futhi injabulo enkulu ngayo yonke inhliziyo yami, Futhi injabulo enkulu ukufisa. Masihlale unenhlanhla, Impilo eqinile izofika, Inhlanhla iyobe iseduze, Vumela ukudabuka nokudabuka kudlule!
Ngihalalisela umyeni wami othandekayo, ngimthanda kakhulu, othandekayo. Namuhla ilanga lomkhumbi selifikile, makube khona amandla amakhulu namandla, iNkosi mayisindise, futhi kuyophela izinto ezinhle kuphela ezizayo. Ngifuna ukukufisela inhlanhla, Ukuthanda nokuhlonipha izihlobo zakho!
Amaphupho iRussia entsha eTaganka Ngomgwaqo wezimoto ukusebenzela ukugibela itanki. Iphupho lomkhulu, esevule ukudla okusemathinini ebhange, futhi waphinde washaya i-fascism etafuleni. Dream Russian, Spanish, Italian Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Umdlali weTank, ziqhenye! Kubo bonke abashayeli, nguwe kuphela olawulayo emotweni yezwe iphupho! Vumela unembeza wakho uhlale uhlanzekile, Futhi siyakuhalalisela ngoMhla we-tankman!
Ukuhalalisela okufushane nge-SMS kusukela osukwini lwe-Tankman
Ngosuku lwe-tanker ngo-2016, izikhungo zesimiso seMnyango Wezokuvikela ziphethe amakhonsathi ngendlela eyenziwa ngamathimba okudala anezinombolo ezihlukahlukene zezwi kanye nezinombolo. Imisakazo kanye nethelevishini isakaza izinhlelo ezithakazelisayo ezizinikele ezenzakalweni zempi, izimoto ezikhaliwe, ukuthuthukiswa kwamabutho amathangi. Emasakazweni abukhoma, abakwa-former servicemen babelana ngokuhlangenwe nakho kwabo kanzima kanye nezinkinga ezinzima baphila phakathi nesikhathi sesevisi, abantu bokuqala bezwe bahalalisela kancane abenzi bokubi ngosuku lwe-tankman. Ungakhohlwa futhi uzothola ukuhalalisela okufutshane nge-SMS kusukela osukwini lwe-tankman, ngesikhathi sokuthumela umngane, ubaba noma umkhulu. Ngifisa ukuba usuku lwama-tanker lujabule, ucabange ngokuhlanzekile! Isevisi elula, Ayikho inkinga! Ubuhlobo obuqotho, Injabulo kubo bonke!
Kuzofika nini eMausoleum Ngesinyathelo se-chantic emgqeni onyawo, Emgwaqweni uzowela amathrekhi Futhi i-parade iyaqhubeka! Phakathi kwesigcawu ekholomu eqhubekayo i-Clank tanks, firepower, Tankmen - Knights kusuka armor, Siyakuhalalisela! Iholidi lakho lihle!
Namuhla bahlonishwa ngakwesokudla, i-Glory Day emasotini, ngikuhalalisela ngenhliziyo, Injabulo nokuthula iminyaka eminingi!
Ukuze usheshe ukuthokozela ukuthokoza okukhulu ngosuku lweTankin evesini, ezithombeni kanye neprose, udinga ukwazi kusengaphambili lapho ugubha umkhosi ngo-2016 eRussia nase-Ukraine. Sithemba ukuthi incwadi yethu iyasiza kuwe futhi iphendule imibuzo yakho ngokuphelele!
Siyakuhalalisela ngomngane omusha we-New Year 2017 we-Rooster evesini, ama-prose namazwi akhe siqu - ama-sms amahle kumngane ngokuhalalisela ngomnyaka omusha
Isimo Sosuku Lwe-Pancake 2017 esikoleni, enkulisa kanye nasemgwaqweni kuwo wonke umuntu - Imidlalo nemincintiswano yemikhosi yeShrovetide Maslenitsa
Izinkondlo ezinhle ze-Easter 2016. Izinkondlo zobuKristu zokuhalalisela ngePhasika. Izinkondlo zangempela zama-Easter-ziyahalalisela
Usuku lwabaSebenzi bezohwebo 2016 - ukuhalalisela ngohlelo lwe-prose, ivesi, ngokuhlekisa, okusemthethweni, okufushane kwe-SMS
Ukudweba ngoFebruwari 23 esikoleni kanye ne-enkulisa emncintiswaneni - ngezigaba ngepensela nopende. I-Master-class enezithombe namavidiyo wesinyathelo ngesinyathelo
Imincintiswano Yonyaka Omusha 2017 wezingane kanye nabantu abadala, inkampani encane ejabule. Imidlalo epholile kunazo zonke kanye nemincintiswano yoNyaka Omusha We-Rooster enkulisa, esikoleni, ekhaya
Iqhude enezandla zakhe kusuka e-cotton pads kanye nephepha, njengophawu loNyaka Omusha 2017. Indwangu yokugqoka, ubuciko kanye namathoyizi omnyaka omusha wezikole ne-enkulisa: amakilasi amahle ngesithombe
Ukwelashwa ngezinyosi kanye nokukhiqizwa kwezinyosi
Ingabe umehluko eminyakeni yobudala udlala ebuhlotsheni?
Ukwelashwa kwezifo zabesifazane ngezinyosi
Photomodel Natalia Stefanenko: iphrofayli, biography
Ama-muffins ane jam nebhokisi le-peanut
Amazambane aphekiwe ngokugxila
Indlela yokuhlukanisa ngokufanele ukudla okusheshayo okubalulekile okuvela ekudleni okungenampilo
Imibala yaseTerrototta empilweni yethu
Izitshalo ze-Potted Aphelander
Izindebe ezinhle ekhaya
Inyama namazambane nama-mushroom